संकटको घेरामा प्रधानन्यायाधीश ! | Dainik News Nepal
संकटको घेरामा प्रधानन्यायाधीश !
प्रधानन्यायाधीश राणा संकटमा पर्ने देखिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा नियुक्त हमालले ४० घण्टा बित्न नपाउँदै राजीनामा दिनुपर्यो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले भदौ १६ बाट गोलाप्रथा लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए, त्यस्तै फेरि म्याद बढाएर असोज मसान्तबाट सुरु गर्ने भनेका थिए ।
तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा यस्तो व्यवस्थाले प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशको अधिकार संकुचित हुने भन्दै सार्वजनिक असन्तुष्टिसमेत पोखेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश राणा आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग हुन नसक्दा अहिले सर्वोच्च लगायत देशभरका अदालतमा पेसी सूची पुरानै हिसाबमा चलिरहेको छ ।
त्यसो त न्यायालयमा भ्रष्टाचारको सुरुआत नै पेसी सूची प्रकाशन गर्दाको चलखेलबाट हुने सर्वोच्चभित्रैका प्रतिवेदनले प्रश्न उठाइसकेको छ । कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्ने तजबिज प्रधानन्यायाधीशलाई हुँदा ‘बेन्च सपिङ’ हुने भन्दै विगतमा न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाइसकेका छन् ।
सर्वोच्चबाटै गठित दुईवटा प्रतिवेदनले तत्काल स्वचालित पेसी सूची व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएमा गोलाप्रथाबाट पनि पेसी तोक्न सक्ने विकल्प पनि दिएको छ । सो विषयमा समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले तत्परता देखाउन सकेनन् ।
पत्नी हत्याको अभियोगमा उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रञ्जनप्रसाद कोइरालाको १२ वर्ष कैद सजाय घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक विचलन देखिएको पूर्वन्यायाधीशको ठहर छ । जबराले आफूसहितको इजलासले अभियुक्त कोइरालालाई आठ वर्ष ६ महिनामै जेलमुक्त गराएका थिए । जुन फैसलाले न्यायिक स्वच्छतामा प्रश्न उठाएको न्यायाधीश फोरमको भनाइ छ । राजधानी दैनिकबाट